वडाध्यक्षमा कसले कहाँ जिते ? - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
वडाध्यक्षमा कसले कहाँ जिते ?
काठमाडौं- शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा कुल ४३ वडाध्यक्षहरु चुनावी मैदानमा थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशको चुनावी नतिजा आइसकेको छ । सबैभन्दा पहिले १६ प्रतिशत मात्र मत थसेको रोल्पाको थबाङबाट वडाध्यक्षको चुनावी नतिजा आउन थालेको हो ।
विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाका ४३ वडाध्यक्ष पदमा शनिबार निर्वाचन सम्पन्न भयो । गत २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा यी ४३ वडाहरुमध्ये २४ वडामा वामपन्थी (एमाले, माओवादी र राजमो) ले जितेका थिए । कांग्रेसले १२ सीटमा मात्र जितेको थियो । अनलाइनखबरका अनुसार बाँकी ७ सीट अन्य दल र स्वतन्त्रले लगेका थिए ।